ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာမင်္ဂလာဆောင်မယ့်သတို့သမီးလေးတွေနဲ့ လိုက်ဖက်လှပတဲ့ဆံပင်စတိုင်လ်များ – Trend.com.mm
Posted on April 4, 2018 by Noel
ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ လက်ထပ်ပွဲကျင်းပချင်တာ မိန်းကလေးတော်တော်များများရဲ့ အိပ်မက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။သင်ရော ပင်လယ်လှိုင်းသံတွေတ၀ုန်းဝုန်းကြားနေရတဲ့ သဲသောင်ပြင်ကမ်းခြေမှာ သင်ချစ်တဲ့သူနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးပြီလား? ဒါဆိုရင်တော့ ပင်လယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့သတို့သမီးအပြင်အဆင်တွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ်။မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်ကလည်းအရေးကြီးသလို ဆံပင်စတိုင်လ်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရပြန်ပါဘူး။ပင်လယ်ကမ်းခြေမှာ မင်္ဂလာပွဲလုပ်မှာဆိုတော့ ပုံမှန်ပြင်နေကျအပြင်အဆင်လို ဆံထုံးထုံးတာမျိုးမဟုတ်ပဲ ဒီလိုပေါ့ပေ့ါပါးပါးစတိုင်လ်လေးတွေလုပ်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဘယ်လိုဆံပင်စတိုင်လ်လေးတွေက ကမ်းခြေနဲ့လိုက်ဖက်လှပလဲဆိုရင်…
ပငျလယျကမျးခွမှော လကျထပျပှဲကငျြးပခငျြတာ မိနျးကလေးတျောတျောမြားမြားရဲ့ အိပျမကျဖွဈမယျထငျပါတယျ။သငျရော ပငျလယျလှိုငျးသံတှတေဝုနျးဝုနျးကွားနရေတဲ့ သဲသောငျပွငျကမျးခွမှော သငျခဈြတဲ့သူနဲ့ မင်ျဂလာဆောငျဖို့စီစဉျထားပွီးပွီလား? ဒါဆိုရငျတော့ ပငျလယျနဲ့လိုကျဖကျတဲ့သတို့သမီးအပွငျအဆငျတှကေိုသိထားဖို့လိုပါတယျ။မိတျကပျအပွငျအဆငျကလညျးအရေးကွီးသလို ဆံပငျစတိုငျလျကိုလညျးမထေ့ားလို့မရပွနျပါဘူး။ပငျလယျကမျးခွမှော မင်ျဂလာပှဲလုပျမှာဆိုတော့ ပုံမှနျပွငျနကေအြပွငျအဆငျလို ဆံထုံးထုံးတာမြိုးမဟုတျပဲ ဒီလိုပေါ့ပေ့ါပါးပါးစတိုငျလျလေးတှလေုပျဖို့အကွံပေးခငျြပါတယျ။ဘယျလိုဆံပငျစတိုငျလျလေးတှကေ ကမျးခွနေဲ့လိုကျဖကျလှပလဲဆိုရငျ…
ကိုယ့်ရဲ့ မျက်နှာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ဆံပင်စတိုင်လ်လေးရွေးချယ်ပြီး အလှဆုံးပင်လယ်သတို့သမီးလေးဖြစ်ပါစေနော်…